निकुञ्ज र मानवबीच बढ्दो द्वन्द्व | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
निकुञ्ज र मानवबीच बढ्दो द्वन्द्व
२०७७ भाद्र १, सोमबार १०:५२ गते
चितवन जिल्लाको विकटताको संघारबाट विकासोन्मुख अवस्थातर्फ बामे सर्दै गरेको समथर भूमि हो माडी । अर्थात्, चितवनभित्रको चितवन भनेर पनि चिनिने भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको छ माडी नगरपालिका । उसो त, माडी विगतमा विभिन्न राजनीतिक भवितव्य घटना, परिघटनाले चर्चा कमाएको नगरपालिका पनि हो । अति नै खेतीयोग्य उर्वरभूमि भएको कारणले गर्दा गोरखा, लमजुङ, धादिङ, म्याग्दीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी विकट पहाडी जिल्लामा बस्ने पहाडिया तथा रैथाने बासिन्दाको रुपमा परिचित थारु, कुमाल, चेपाङ, बोटेलगायतका जातजातिहरुको घनत्व रहेको नगरपालिका पनि हो माडी ।
उर्वरभूमि भएकै कारण तथा ऐलानी जग्गा अधिकरण गरी अथवा पैसा हुनेहरुले बसाइँ सरेर आउँदा ल्याएको केही रकमले पनि सस्तो मूल्यमा धेरै जग्गा किन्न सकिने थलो हो यो । त्यसैले, बसाइँसराइको मध्यकालीन अवस्थामा पहाडबाट झर्नेको ओइरो माडीतर्फ आकर्षित हुनु अर्को कारण रहेको हो । उत्तरतर्फ रिउ खोला तथा माडी नगरपालिकाअन्तर्गत रहेका बघौडा, बसन्तपुर, बरूवाबजार, किर्तनपुर, देवेन्द्रपुर, बगईलगायत ठोरी जाने हुलाकी मार्गसम्म पुग्न दुई दर्जन हाराहारीको खहरे खोलाको पासो थापेर बसेको नगरपालिका पनि हो माडी ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत नेपालका स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको उपयोग गर्दछन् । तर, माडी नगरपालिका सबै मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकाले एउटा यस्तो अपवाद हो जसले ऐनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न सक्दैन । खोला तथा नदीको सतह मानवबस्तीभन्दा माथि आइसकेका छन् । बाढी आउनेबित्तिकै बस्ती र खेतमा बाढी प्रवेश गर्दछ । तर, नगरपालिकाले बाटोका खाल्डाखुल्डी पुर्न आफ्नो साधन प्रयोग गरेर ग्रेगर वा गिट्टी–बालुवा उठाउन पाउँदैन ।
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारैतिरबाट राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको मानवबस्तीमा बर्सेनि जंगली हात्ती, अन्य जंगली जनावर र बाढीको रुपमा बेलाबेलामा संहारकारी विनाश रुप लिएर बहुलाउने रिउ खोलाले सताउने त छँदै थियो, अन्य खहरे खोलाले समेत माडीवासीको ज्यान लिँदै आएको छ । यस्ता जोखिमसँग लड्दै आएका माडीवासीहरु जंगली जनावरबाट जति आतङ्कित भएका छन् त्योभन्दा बढी आतङ्कित, प्रताडित र दण्डित निकुञ्ज प्रशाशन र नेपाली सेनाबाट भएका छन् ।
विश्वको पहिलो एलोस्टोन राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत ठूला–ठूला र मह¤वपूर्ण मानिएका राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा चाक्ला–चाक्ला पिच बाटा र धेरै मानिसहरु सहजरुपमा घुम्न जान सक्दछन् । तर, हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जले विश्वसम्पदा सूचीका नाममा बाँदरे युग जिउने कुराको वकालत गर्दछ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएर हामीले पाउने सानो इनाममात्रै हो । विकसित देशले आफ्नो मुलुकको जंगल फाँडेर उद्योग सञ्चालन गरेर ओजोन तहमा पारेको प्वाल हामीले टाल्ने जिम्मा लिनु परेको छ ।
नेपालको संविधान–२०७२ ले सबै नेपाली नागरिकहरुलाई देशको सीमाघेराभित्र निर्बाध आवतजावत गर्न छूट दिए पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज पार गर्नुपर्ने ठाउँहरुमा रातिको समयमा आवतजावत गर्न पाइँदैन । अझ, माडीजस्तो तीनतिर राष्ट्रिय निकुञ्ज र अर्कोतिर भारतीय सिमाना चुरेको घना सामुदायिक वन भएको ठाउँमा रातको समयमा कैदी जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । दुई वर्षअगाडिसम्म त त्यहाँ मानिसहरुले घरबाट आउँदा र जाँदा राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो । निकुञ्जले कुसुमखोला बस्तीलाई अतिक्रमित क्षेत्र मान्दै आएको छ ।
नेपाली सेनाले माछा मार्न जाने, घाँस–दाउरा गर्न जाने पुरूषलाई पक्रेर यातना दिने गरेका छन् । केही अराजक तथा आपराधिक मनोवृत्ति भएका सेना तथा कर्मचारीहरुले घाँस–दाउरा गर्न जाने महिलाहरुलाई डर, धम्की देखाउने, ललाइफकाई गर्भिणी बनाएर घर न घाटको बनाएपछि रमानापत्र लिई अर्को जिल्लाको पोस्टमा सरूवा मिलाएर जाने सेनाहरु पनि छन् । त्यस्ता घटना र मुद्दा जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा त्यत्तिकै छन् । कति पीडित महिला र उनीहरुको संसर्गबाट जन्मिएको बच्चालाई परोपकारी संस्थाको माध्यमबाट कानुनी न्याय दिलाई उद्धार गरिएको समाचार पनि आइरहेकै हुन् ।
माडी कुसुमखोलामा बस्ती बसेको दुई दशक बढी भयो । यो बस्तीलाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्न खोजिएको पनि केही वर्ष बित्यो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मात्र जोडबलले बस्ती सार्न सकिएको थिएन । २०७६ वैशाखमा निकुञ्ज, माडी नगरपालिका र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रमबीच बस्ती स्थानान्तरणको सहमति भयो । बस्ती कहाँ सार्ने निर्णय भने हुन सकेन । पछि मध्यवर्ती क्षेत्रको बस्ती सारेर मध्यवर्ती क्षेत्रमै बसालिने सहमति भयो । उक्त सहमतिपश्चात् यहाँका एक सय ५० घर स्थानान्तरणका लागि तयार भए, दस घर तल झरेनन् । कुसुमखोला पुग्न माडी नगरपालिकाको बगई (भरतपुर–माडी–ठोरी हुलाकी मार्ग)बाट दुई घन्टा हिँड्नुपर्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको यो बस्ती माडीका अन्य बस्तीभन्दा उचाइमा छ ।
चितवनकै विभिन्न गाउँ तथा छिमेकी जिल्लाहरुबाट समेत आएका चेपाङ, भुजेल, तामाङहरुले यहाँ बस्ती बसाएका थिए । अब बाँकी चेपाङमात्रै छन् । कुसुमखोलामा मकै, कोदो, तोरीलगायत बालीको राम्रो उत्पादन हुन्छ । खोलानजिकै बस्ती रहेका कारण केहीले धानसमेत रोप्ने गरेका छन् । जीवननिर्वाहका लागि जंगललाई आफ्नो सन्तानजत्तिकै माया गरेर कुसुमखोलालगायत क्षेत्रमा छाप्रो बनाएर बसेका सुकुमबासी भूमिहीन यतिबेला अप्ठ्यारोमा परेका छन् । निकुञ्जको पोस्टबाट खटिएका हात्ती, सैनिक र कर्मचारी मिलेर ८ घर ध्वस्त पारे । त्यतिले नपुगेर दुई घरमा चाहिँ आगो नै लगाए । त्यतिमात्र होइन, वरिपरि लगाएको बालीसमेत हात्ती लगाएर ध्वस्त पार्न लगाइयो ।
राष्ट्रिय निकुञ्जवरपर सुकुमबासी समस्या हाल जटिल बन्दै गइरहेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका मूलतः कुसुमखोला, भालुखोला, प्याउली, बाँदरझुला आदि सुकुमबासी बस्तीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न जरूरी छ । दशकौँदेखि बसिरहेको बस्तीलाई उचित व्यवस्थापन नगरी बेलाबेलामा आगजनी तथा हात्ती लगाएर भत्काउनेजस्तो अमानवीय कार्य वर्तमानलगायत विभिन्न सरकारहरुले गर्दै आइरहेको छ । यो कार्यको जति निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जनताको बास जलाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन भन्ने कुरा हेक्का रहनुपर्दछ । यस्तो अप्ठेरो स्थितिका मान्छेलाई आश्रय दिएर सहयोग गर्नु त कता हो कता, उल्टै हात्ती लगाएर आगजनी गर्ने, भिœयाउने बेलाको बाली नष्ट गर्ने कामको जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । अझ त्यसमाथि पनि राज्यको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाएर नागरिकमाथि नै ज्यादती गर्नु कर्मचारीको अन्यायपूर्ण दादागिरी हो । यस्तो तरिकाले देश बन्नुको सट्टा उल्टो बिग्रन्छ भन्ने कुरा शासनसत्तामा बस्नेले कहिले बुझ्ने ?
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै सुविधाप्राप्त बाटोबाट माडी—भरतपुर आवतजावत गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो घरायसी प्रयोगका धेरै सामग्रीहरु ल्याउन पाउँदैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको उत्पादनबाहेकको अवस्थामा कुटो, कोदालो, घरायसी प्रयोगमा रहेका फर्निचर, सागपात, निहुरो, झाडुलगायतका सामग्रीहरु एउटा घरबाट अर्को घर लैजान पाइँदैन । दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले कहिल्यै पनि जनताका न्यूनतम विकासका आवश्यकतालाई ध्यान दिएर व्यवहार गर्न सकेन ।
विसं २०५०/६० ताका माडीवासीको ठूलो दुःखका रुपमा रहेको राप्ती नदीमा पुल बनाउनुपूर्व र बनिसकेको पुलको उद्घाटनमा बाधा–अड्चन पु¥याएको विषयमा उनीहरुको दुखेको मन अझै भरिन सकेको छैन । त्यसैगरी, माडीवासीले विद्युतीकरणमा समेत धरै दुःख भोग्नु परेको छ । निकुञ्जभित्र अग्लो ट्रान्समिसन लाइन बनाउन स्वीकृति प्राप्त नभएपछि भूमिगत ट्रान्समिसन लाइन बनाइयो, जसमा मर्मतसम्बन्धी प्रविधि देशभित्र नभएकोले पटकपटक समस्या आइरहेको छ ।
खास गरेर चितवनको मैदानी भागको भूमिपुत्र थारु आदिवासी र पहाडको चेपाङ आदिवासी हो । यिनै आदिवासीहरुले निर्माण गरेको चितवनमा झन्डै ७६/७७ जिल्लाका जनसमुदायहरु ओत लागेका छन् । आज राज्य अनुदार बन्दै त्यही चेपाङ आदिवासीहरुलाई उठीबास गराइरहेको छ । २०४७ सालदेखि कुसुमखोलामा बसोवास गर्दै आएका फिरन्ते जातिको रुपमा चिनिने चेपाङ समुदायले यतिबेला अति सङ्कटको अवस्थामा जीवनयापन गर्नु परेको छ ।
वर्तमान संविधानले सुकुमबासीको समस्या स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यस अर्थमा कुसुमखोलाका ती चेपाङको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा माडी नगरपालिकाको हुनुपर्ने हो । तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बक्रे दृष्टिका कारण यहाँका सुकुमबासीको समस्या समाधान उन्मुख देखिन्न । त्यसैले, यस्ता समस्या बुझेका कारणले स्थानीय सरकारलाई सबै अधिकार दिएर समाधान गर्न लगाउनुपर्छ । अनिमात्र पुनः अन्यत्रबाट पनि यी चेपाङजस्तै हालतका गरिबगुरूवाको वर्षायाममा रूवाबासी हुने छैन ।
जुनसुकै किन नहून्, सरकारी निकायहरुले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनीहरुले गर्ने हरेक क्रियाकलाप नागरिकको सुखसुविधाप्रति केन्द्रित हुनुपर्छ । वास्तवमा कर्मचारीको काम नै नागरिकको हकहित र अधिकार संरक्षणका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रा कर्मचारी सधैँ सर्वसाधारणप्रति रवाफ देखाउँछन् । गरिब र निमुखाप्रति शासकको व्यवहार प्रदर्शन गर्छन् । चितवनका गरिब चेपाङप्रति कर्मचारीले गरेका व्यवहार यसैको पछिल्लो उदाहरणमात्र हो ।
पहिलो कुरा त जंगल र दोस्रो नदीको किनारछेउ कोही पनि रहरले बस्न आएका होइनन् । आफ्नो मुन्टो लुकाउने ठाउँसमेत कतै नभएकाले बाध्यताले विभिन्न जिल्लाबाट त्यहाँ पुगेर घरबास जोहो गरेका हुन् । समग्रमा हेर्दा त्यहाँ बसोवास गर्ने मान्छेको अन्यत्र जग्गा छैन । कसैको सानो टुक्रा भइहाले पनि विभिन्न समयको बाढीपहिरो र भूकम्पले सखाप पारिसकेको अवस्था छ । कैयौँपटक जंगली जनावरले आक्रमण गरेका छन् । बाढीले सताइएका छन् । उठीबासको चपेटामा परेका छन् । तर पनि त्यही ठाउँमा बस्न विवश हुनुको अर्थ हो, उनीहरुको अन्य कुनै विकल्प छैन । जसको अन्यत्र कुनै विकल्पै छैन उनीहरुले त्यहाँ वन विनाश गर्ने, नचाहिने काम गर्ने गर्लान् त ? यो कदापि सम्भव छैन । त्यसैले, गरिबमाथि वन हड्पेको, विनाश गरेकोजस्ता आरोप लगाउनु गलत छ । यही आरोपमा उठीबास गराउनु त झनै महाअन्याय हो ।
वन्यजन्तुबाट सिर्जित मानवप्रतिको जोखिम, मानवबस्तीका कष्ट र पछौटेपनको समुचित व्यवस्थापन के हो त ? भन्ने प्रश्न मह¤वपूर्ण छ । माडीका जनताले एकातर्फ पलपलमा जनधनको जोखिम व्यहोर्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ सुविधायुक्त बाटोघाटो, बिजुलीजस्ता न्यूनतम आवश्यकता र आर्थिक उपार्जनका लागि साना तथा मध्यम उद्योगधन्दा खोल्नबाट वञ्चित नै रहनु परेको छ । यसो त, बढी जोखिम व्योहोर्नेले बढी आय वा सुविधा भोग गर्नुपर्ने प्रकृतिक नियम नै हो तर दुःखको कुरो, यहाँका जनताले झन् दुःखी जीवन गुजार्नु परिरहेको छ ।
संरक्षण र विकास सँगसँगै हिँडाउन सकिएन र एक पाटो कमजोर तथा अर्को पाटो बलियो भयो भने भए गरेका विकासहरु दिगो हुन सक्दैनन् । हालमा देखिएको विकासमा व्यवधान र पीडितका समस्याहरु समाधानका लागि करिव पाँच दशक पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ संशोधन गरी विकासमैत्री संरक्षणमा जोड दिने खालको ऐन बनाउनुपर्दछ र दीर्घकालीनरुपमा जनावर–मानव द्वन्द्व समस्या समाधानमा लाग्नुपर्दछ । यसो गर्न सकेको खण्डमा माडीलगायत राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रका जनताको धारणामा राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो लागि व्यवधान होइन, बरू वरदान हो भन्ने पर्न सक्छ ।
काठमाडौँ, २० मङ्सिर (रासस) । सरकारले कोभिड–१९ को विरुद्धको खोप २० प्रतिशत नागरिकलाई पुग्नेगरी ल्याउने भएको छ । विभिन्न देशमा...
मदन भण्डारी फाउन्डेसनको विरुद्धमा नाराबाजी
सिद्धिविनायक सहकारी संस्थाको साधारण सभा